Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0312 tal
Ny endrik'Andriamanitra (2)
Talata 16 Okt.
Na inona ihany koa mety ho hevitry ny hoe: “nohariana araka ny endrik’Andriamanitra” na inona, dia mampiseho izany fa natao hanana fifandraisana isika. Inona avy izany fifandraisana izany, ary ahoana no tokony hataontsika ao anatiny araka ny namoronana antsika?
Vakio ny Gen. 2:19,20. Milaza inona amintsika avy hatrany izany mikasika ny fifandraisan’ny taranak’olombelona amin’izao tontolo izao?
Fanadihadiana betsaka tokoa no nosoratana nandritra ny taonjato maro mikasika ny hevitr’ireo andininy ireo. Ny mahavariana eto ankoatra ny zavatra hafa rehetra, dia ny fisian’ny fifandraisana ety dia ety teo amin’i Adama sy i Eva. Avy tamin’ny vovo-tany no nanaovana an’i Adama ary avy tamin’i Adama kosa i Eva (manampy eo amin’ny fanavahana an’i Eva amin’ireo zavaboary hafa teto an-tany izany). Azo antoka àry fa tafiditra ao amin’io nanaovana antsika ho araka ny endrik’Andriamanitra io ny fahafahana manana fifandraisana akaiky sy fifandraisam-pitiavana (tsy isalasalana fa mampiseho taratra ny fifandraisana misy eo amin’Andriamanitra telo izay iray mihitsy izany).
Diniho miaraka indray izao ny Gen. 1:27 sy ny Gen. 3:20 ary ny Asa. 17:26. Amin’ny fomba ahoana no nitaran’ny firaisana nisy teo amin’ireo olombelona mpivady voalohany ireo ka nahatrarany ny firaisan’ny taranak’olombelona rehetra? Hilaza inona ny firaisan’ny taranak’olombelona eo anatrehan’ireo olana mahakasika ny fitondran-tena, toy ny tsy fisian’ny rariny, ny fanavakavaham-bolon-koditra, sy ny sisa?